Syria: Avelao hirotsaka ny ranomandry! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Desambra 2010 6:26 GMT
Vakio amin'ny teny Français, македонски, Español, বাংলা, 한국어, Shqip, srpski, 日本語, 繁體中文, 简体中文, English
Toetrandro tsy nahazatra loatra narahan-tafiotra no nanamarika ny herinandro lasa teo tany amin'ny faritra maro tany Levant, raha nirotsaka ny orana efa nandrasana ela sy ny ranomandry tsy nampoizina nandrakotra izay rehetra taka-maso. Tao an-drenivohitra Siriana, sambany rakotra ranomandry indray ny arabe rehetra raha tsy nisy izany an-taona maro. Tao Damas, na dia misy ranomandry tsindraindray ihany aza, tsy dia mijanona ela eo ambonin'ny tany ireny. Mpitoraka bilaogy Siriana iray, 50% Syrian, no ravo tamin'ity zava-miseho ity:
Ho an'y ankamaroan'ny tanora ao Damaskosy (20 taona, na manakaiky ny 30 taona), voalohany teo amin'ny andro niainan-dry zareo izao nahitany ranomandry ao Damaskosy izao. Tatitra iray vao avy novakiako no nahalalalako fa efa ho 25 taona no nisy ranomandry farany tao amin'ity tanana mahafinaritry ny saina amam-panahy ity. Nefa raha ny filazan'ny rafozan-dahiko, dia 50 taona lasa izay no nisy ranomandry nirotsaka… ary tsaroany mihitsy hatreto hoe nahita ranomandry teny an-dalamben'ny renivohitra Siriana…
Talohan'ny nipetrahako teto amin'ity tanàna lalaiko sy tiako ity, dia efa nivezivezy teto Damaskosy foana tamina vanim-potoana samihafa aho, saingy izao no voalohany nandritry ny 30 taona mahery niainako mba nahitako izany ranomandry mirotsaka avy any an-danitra izany, midoladola sy mahafinaritra, mameno fanantenana sy fitiavana any anatiko any, mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra.
Sary avy amin'i Mustafa Hamido, Tetikasa Aleppous
Why so Syria? dia mamaritra ny tenany ho Meksikana-Amerikana ao Damaskosy taorian'ny fandalovana kely tany Boston. Noho io antony io, tena zendana manokana mihitsy izy nifoha tanaty tafiotran-dranomandry. Hoy ilay mpitoraka bilaogy manoratra:
Dia izay izany, afaka andro vitsy ny Krismasy saingy tamin'ity maraina ity dia nifoha tanaty rotsa-dranomandry matevintevina ihany isika teto Damaskosy. Tena zava-tsy nampoizina sy tsy nandrasana saingy mahafinaritra! Raha mbola sahirana iny aho nanokatra ny masoko ka nijery avy eo am-baravarankely, ary tao anaty ampahefatry ny segondra monja, dia mbola nihevi-tena ho any Bostona foana..
…Mitahiry zava-tsy ampoizina maro ity tanàna ity. Amin'ny fotoana iheveranao fa efa hainao tsara ny aminy, BAM — RANOMANDRY! Tena tsy takatry ny saiko.
Sary avy amin'ilay mpitoraka bilaogy Why So Syria?
Nampalahelo ilay Siriana mpitoraka bilaogy Ayman Ashour fa tsy nahatratra ny firotsahan'ny ranomandry. Hoy izy manàla azy:
Ho an'ny sasany aminay tsy mba nahita ny hakanton'ny hatsiaka sy ny fanomezana tsara indrindra avy amin'ny ranomandry dia mangataka anareo mba handefa sary hahafahanay mampitony ny zanakay izay midongy hilalao ranomandry toy ny nataontsika fahiny.
Fahitalavitra Siriana iray mandeha amin'ny alalan'ny zanabolana sno nizara video mahafinaritra tao amin'ny YouTube, handokoana ny hakanton'ny firotrahan'ny ranomandry tao Damas:
Ny sary voalohany dia an-dry: Mostafa Hamido, Aleppous Project